Tag: david madhongi | Martech Zone
Chipiri, July 11, 2006 Chipiri, July 4, 2017 Douglas Karr
Vhiki rino, ndinosuruvarisa ndiri parutivi panguva yeMashup Camp. Basa rangu idzva remabasa rakandidhonzera kumashure kubva kuKubatanidzwa uye zvimwe mukutungamira kwechigadzirwa. Gore rakapera ndakaenda kuMashup Camp yekutanga yegore uye nekukurumidza ndakavaka hushamwari neboka rine tarenda revanhu vakavaka chirongwa ichi. Muchokwadi, ini ndinonyatso gamuchira Mashup Camp mawebhusaiti uye ndakagadzira logo iyo yavari kushandisa gore rino. Kuenda kumisasa iyi, imwe ndeyechokwadi
Mugovera, June 10, 2006 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Ini ndanga ndichitaura neshamwari yangu yakanaka, Bob Flores, anova mutungamiri muindasitiri yeTelecom. Bob anodzidzisa makambani pamusoro pehutungamiriri hwekambani uye anoita basa rekuvaka kugona muindasitiri yeTelecom. Bob akandibvunza manheru ano izvo zvandaifunga iyo inotevera Internet pfungwa huru yaive. Hezvino izvo zvaive pfungwa dzangu: Iko hakuna mari yakawanda yekuve nayo pawebhu nekungovaka peji rewebhu. Iyo Internet iri kusangana mune multimedia uye